Faminaniana - Tambajotra Meteorolojia | Web Meteorology (Pejy 2)
Ny fiakarana 3 degre dia mety handrahona ny sosona ozone
Raha mitohy ny fiakaran'ny maripana manerantany, dia mety hihamalemy ny sosona ozone, mampitombo ny isan'ny trangana homamiadana.
Hitombo ny doro ala ao anatin'ny taona ho avy
Amin'ny taona ho avy, rehefa miakatra ny mari-pana dia hitombo hatrany hatrany ny doro ala.
Raha tsy mijanona ny fiakaran'ny maripana amin'ny tany isika dia hisy 60 ny olona maty aloha amin'ny 2030
Ny fiakaran'ny marin'izao tontolo izao no fandrahonana lehibe indrindra atrehantsika. Raha tsy ajanontsika ara-potoana izany dia ho faty mialoha ny 60 amin'ny 2030.
Ny mari-pana dia mety hiakatra amin'ny degre 2 sy 5 amin'ny faran'ny taonjato
Raha tsy hoe ny tena ezaka hialana amin'izany dia mety hiakatra 2 ka hatramin'ny 5 degre ny mari-pana antonony manerantany amin'ny faran'ny taonjato.
Ny fiovan'ny toetrandro dia hamono eropeana 152 amin'ny faran'ny taonjato
Amin'ny faran'ny taonjato dia hamono eropeana 152 tapitrisa ny fiovan'ny toetrandro raha tsy ahena ny famoahana entona mandoto.
Ny fiakaran'ny mari-pana manerantany dia mety hitarika fitomboan'ny pathogens any Eropa
Rehefa miakatra ny maripana manerantany, dia mety hampidi-doza ny fahasalaman'ny eropeana ny viriosy, bakteria, holatra ary otrikaretina hafa.
Afaka 12 taona dia ho fantatsika raha nahavita niady tamin'ny fiovan'ny toetrandro isika
Mandrahona ny ain'ny olona an-tapitrisany ny fiovan'ny toetrandro. Raha te hahalala raha nahavita niady dia mila miandry 12 taona isika.
Mety hiharatsy ny desertitra any atsimo atsinanan'i Espana amin'ny taona ho avy
Mety hampidi-doza ny fambolena eto amin'ny tanintsika amin'ny fotoana fohy sy antonony ny tany hay. Lazainay aminao izay fepetra azo raisina hisorohana.
CAMPI FLEGREI: Supervolcano lehibe indrindra any Eropa, mifoha
Ny supervolcano Italiana Campi de Flegrei, dia tsy mijanona mampitombo ny tsindry ataony, ary manakaiky ny teboka mitsikera. Mailo ny manam-pahaizana sy ny tompon’andraikitra.
Ilay lehibe: faminaniana momba ny horohoron-tany Mega ho any Kalifornia
Big One .. anarana nomena ny horohoron-tany izay antenain'ny mpahay siansa indray andro any amin'ny State of California. Mihamaro hatrany ny akaiky.
Mety ho lasa maitso i Afrika Avaratra noho ny fiovan'ny toetrandro
Miaraka amin'ny fitomboan'ny diplaoma roa degre fotsiny i Afrika Avaratra dia hiala amin'ny tany efitra ka hatrany amin'ny tanimboly ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Asidra solifara mety orana eto an-tany noho i Donald Trump
Izany no tenin'i astronomia Stephen Hawking. Ny olombelona dia mety hanana isa ny androny raha mbola miaina eto an-tany.
Manana 3 taona sisa isika hisorohana ny voina amin'ny toetrandro
Tonga amin'ny teboka iray izay tsy maintsy hiatrehantsika trangan-javatra mahery vaika isika. Ary manana 3 taona sisa isika hisorohana ny voina amin'ny toetrandro.
Ahoana ny fomba hiandrasana mialoha ny orana amin'ny fihetsiky ny biby
Ny zava-misy lehibe momba ny biby izay miandry ny oram-baratra na tafiotra mahery noho ny fihetsik'izy ireo, sy amin'ny faritra samihafa.
Ny 74% -n'ny mponina eran'izao tontolo izao dia mety ho tratry ny onja hafanana mahafaty amin'ny 2100
Amin'ny tranga ratsy indrindra, tamin'ny faran'ny taonjato faha-74% amin'ny mponina manerantany dia afaka niatrika onja hafanana mahafaty.
Ny fahavaratra dia mety ho mafana kokoa noho ny mahazatra any Espana rehetra
Ny fahavaratry ny 2017 ve no ho mafana indrindra any Espana? Tena azo atao izany. Ny mari-pana dia mety mihoatra ny sanda ara-dalàna mandritra ny taona maro manerana ny firenena.
Hanao ahoana ny ririnina?
Rahoviana no miditra ny ririnina? Lazainay aminao hoe hanao ahoana ny ririnina 2017/2018. Raha ny filazan'ny AEMET dia antenaina hafanana kokoa noho ny mari-pana mahazatra. Saingy mbola misy bebe kokoa ...
Ho potika ilay talantalana Larsen C goavambe any Antarctica
Tsy ho ela dia ho vaky ny talantalana Larsen C: mety hamoy ny 10% ambonin'io izy io mba hamorona vongan-dranomandry lehibe indrindra teo amin'ny tantara.
Voan'ny fiovan'ny toetrandro ny ora fatoriana
Manana olana amin'ny torimaso ve ianao? Araka ny fanadihadiana iray, rehefa manafana ny planeta ity dia hiharatsy hatrany hatrany ny toe-javatra manerana ny planeta. Fantaro ny antony.
Afaka niditra tao anaty rano i Miami talohan'ny faran'ny taonjato
I Miami dia tanàna amoron-tsiraka misy olona amina olona an-tapitrisany maro izay mety hampidi-doza ny ainy raha miakatra ny haavon'ny ranomasina.
Amerika dia mety ho lany glaciers tamin'ny faran'ny taonjato
Na dia tsy mino ny fiakaran'ny hafanana manerantany aza i Donald Trump, dia mety hanjavona ny glaciers ao amin'ny fireneny amin'ny faran'ny taonjato.
Mety hanjavona ve ny Ranomasina Maty?
Ny Ranomasina Maty dia toerana mety ahiana hanjavona noho ny fiovan'ny toetrandro. Fa nahoana? Mandrosoa dia holazainay aminao.
Afaka miaina ny fiovan'ny toetr'andro ve i Amazon?
Heverinao ve fa ho tafavoaka velona amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny ala i Amazon? Midira ary holazainay aminao ny mety hitranga amin'ny havokavoky ny planeta.
Ny horohorontany »taonjato» manaraka dia mety hitranga any Silia
Horohoron-tany lehibe matetika no mitranga any Silia, fa mety io koa no hisy ny "horohoron-tany tamin'ny taon-jato" manaraka. Fa nahoana?
Isaky ny ambaratongam-panafana, efa ho 4 tapitrisa kilometatra toradroa permafrost no very
Miaraka amin'ny ambaratonga miakatra ny mari-pana eto ambonin'ny tany, dia efa ho 4 tapitrisa kilometatra toradroa permafrost no very, izay lehibe kokoa noho India.
Hanao ahoana ny vanim-potoanan'ny rivodoza 2017?
Hotantarainay aminao ny fomba antenaina amin'ny vanim-potoanan'ny rivodoza 2017. vanim-potoana antenaina fa hatanjaka kokoa noho ny teo aloha.
Amin'ny taona 2050, hisy fiatraikany amin'ny hafanana hiantraika amin'ny olona 350 tapitrisa fanampiny
Ny fihenjanana hafanana dia iray amin'ireo olana rehefa manafana ny planeta, ka hiantraika amin'ny olona 350 tapitrisa fanampiny izany.
Ny fihenan'ny tany dia mety hampihena ny biby mampinono
Noho ny hafanan'ny planeta Tany, dia mety hihena ny haben'ny biby mampinono. Fa nahoana? Midira dia holazainay aminao.
Etazonia dia afaka miaina fitomboan'ny 2ºC alohan'ny sisa amin'ny planeta
Ny salanisan'ny maripana manerantany dia mitombo, saingy i Etazonia dia mety hiaina fiakarana 2ºC na mihoatra amin'ny 2050, alohan'ny ambin'izao tontolo izao.
Ny tondra-drano be any Eoropa dia matetika kokoa amin'ny faran'ny taonjato
Ny tondra-drano mahery vaika dia matetika kokoa any Eropa amin'ny 2100. Fa maninona? Midira ary fantaro hoe ohatrinona no hiakatra ny haavon'ny ranomasina amin'ity faritra ity.
Hanao ahoana ny lohataona 2017?
Te hahafantatra ve ianao hoe hanao ahoana ny lohataona 2017? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny toetr'andro antenaina ao anatin'ny telo volana.
Ny mpitsoa-ponenana amin'ny toetrandro dia hanisa an-tapitrisany amin'ny 2050
Amin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX dia olona maromaro no voatery mandao ny fireneny. Izy ireo dia ho mpitsoa-ponenana amin'ny toetrandro.
Mety ho lany ny paosin'ny glasy i Espana vokatry ny fiakaran'ny hafanana
Espaniola dia mety ho tratran'ny redoubt glacial tao anatin'ny efa-polo taona monja vokatry ny fiakaran'ny maripana.
Ny hafanana manerantany dia mety hampihena ny hafanana tonga lafatra amin'ny andro
Araka ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary Fiovan'ny Toetr'andro, ny fihenan'ny tany dia hampihena ny hafanana tonga lafatra mandritra ny andro any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao.
Onja mangatsiaka any Espana: ny firenena mangatsiaka (afa-tsy ny Nosy Canary)
Ny onja mangatsiaka any Espana dia mamela ny oram-panala amin'ny haavo ambany indrindra, manomboka amin'ny haavon'ny ranomasina. Inona ny toetr'andro andrasana anio sy rahampitso? Hilaza aminao izahay.
Hidina ny mari-pana any Espana manomboka rahampitso
Manomboka rahampitso zoma, andrasana ny fahatongavan'ny tafio-drivotra mangatsiaka miaraka amin'ny rivotra mahery izay afaka mamela oram-panala lehibe.
Mafana ny taona 2017, saingy tsy ho firaketana an-tsoratra izany
Araka ny vinavinan'ny UK Met Office, ho taona mafana ny 2017, saingy tsy ho tratra ny maripana.
Ny mari-pana any Antarctica dia mety hiakatra 6 degre amin'ny faran'ny taonjato
Raha ny fanadihadiana vaovao iray dia hiakatra 6 degre ny mari-pana any Antarctica amin'ny faran'ny taonjato; avo roa heny noho ny eran'izao tontolo izao.
Hiteraka tafio-drivotra bebe kokoa any Etazonia ny fiakaran'ny maripana
Araka ny fanadihadiana iray vaovao, alohan'ny faran'ny taonjato dia hisy fitomboan'ny tafiotra any Etazonia, indrindra fa ny delta any Mississippi.
Hanao ahoana ny fahalavoana?
Rehefa avy nandany fahavaratra mafana dia hanao ahoana ny fianjerana? Raha ny filazan'ny AEMET dia zavatra hafa noho ny mahazatra antsika io. Hilaza aminao izahay.
Mitete hatramin'ny 9 degre hamaranana ny hafanana
Te-hangatsiaka sahady ve ny toetr'andro? Raha izany dia tsy mila miandry ela ianao. Amin'ity faran'ny herinandro ity dia fihenan'ny hatramin'ny 9 degre no antenaina any Espana.
Namely an'i Japon ny rivo-doza Mindulle
Ny rivodoza Mindulle nandrava dia namely ny renivohitr'i Japana tamin'ny rivodoza mahery izay tokony ho 180 kilometatra isan'ora.
Ny "fahafatesan'ny ririnina" dia manaitra ny fiarahamonina siantifika
Ny fiakaran'ny maripana dia mitondra taona mafana sy mafana kokoa antsika. Hanao ahoana ny fizaran-taona? Mety ho tonga tsy ho ela ny fahafatesan'ny ririnina.
Fahamarinana 5 momba ny fiakaran'ny tany
Tandremo tsara fa aza adino ny antsipirihany momba ireo fahamarinana 5 momba ny fiakaran'ny marin'izao tontolo izao fa mijaly ny planeta iray manontolo.
Ity no vanim-potoana rivodoza 2016 any Atlantika hoy ny NOAA
Hanao ahoana ny vanim-potoanan'ny rivodoza Atlantika amin'ny 2016? Raha ny filazan'i NOAA dia mety ho malefaka kokoa noho ny mahazatra aza izy io. Midira hahalala bebe kokoa.
La Niña dia mety ho tonga amin'ny fararano ary hiteraka korontana amin'ny toetrandro
Taorian'ny El Niño dia tonga i La Niña, tranga iray izay hampangatsiaka ny ranon'ny Pasifika, manova ny toetrandro manerana ny planeta. Midira hahalala bebe kokoa.
Amphibians, resy be amin'ny fiovan'ny toetrandro
Ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro dia mahatonga ny karazana amphibians maro hanjavona haingana tsy ho ambonin'ny tany.
Amin'ny taona 2016, ny mari-pana dia hitombo 1 ka hatramin'ny 2 degre raha oharina amin'ny salanisa
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana momba ny toetr'andro sasany dia mandritra ny taona 2016 dia hisy fiakaran'ny maripana 1 ka hatramin'ny 2 degre raha oharina amin'ny salanisa.
Earth Wind Map, sari-tany toetr'andro hypnotic sy interactive
Rindrambaiko solosaina vaovao, Earth Wind Map, hita amin'ny internet ary azon'ny mpampiasa rehetra atao, ahafahantsika mandinika amin'ny fomba hita maso sy tsara tarehy ary, izay zava-dehibe kokoa, angona nohavaozina momba ny onjan-drivotra mitranga eny an-dàlana. manerana ny planeta.